नेताहरूको राजनीतिले गर्दा हाम्रो देश बिग्रियो : भन्नुहुन्छ मन्त्री आले – Points Nepal
नेताहरूको राजनीतिले गर्दा हाम्रो देश बिग्रियो : भन्नुहुन्छ मन्त्री आले
प्रकाशित मिति: शनिबार, माघ २२, २०७८ समय: १०:४६:२९
नेताहरूले गर्दा हाम्रो देश बिग्रियो : मन्त्री आले
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले नेताहरूको कु`दृ`ष्टिको कारणले गर्दा देश बि`ग्रि`एको बताएका छन् । शुक्रवार पर्यटन क्षेत्र पुनरु`त्थान निर्देशक समितिको पहिलो बैठकलाई स`म्बो`धन गर्दै मन्त्री आलेले नेताहरूको कारण देश बिग्रि`एको बताएका हुन् ।
मन्त्री आलेले आजको दिनसम्म मन्त्रालय अन्तर्गतको विभिन्न अ`निय`मि`तताहरूको अध्ययन गर्नमै आफ्नो समय खर्च भइरहेको उल्लेख गरे । उनले तत्का`लीन पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले ब`ता`स समूहसँग सेटिङ गरी सस्तोमा जग्गा भाडामा उपलब्ध गराउनेदेखि विभिन्न नि`का`यहरूमा ब`तास समूहसँग सम्बन्धित मान्छेहरूलाई राजनी`तिक नियु`क्ति दिला`एको आ`रो`प पनि लगाए ।
उनले भने – ‘पशुपतिमा ध`र्मशा`ला बनिसकेपछि त्यसको टेन्डर प्रक्रि`या पनि पशुपति क्षेत्र विकास कोषको मिटिङ बसेर मिटिङले पास गरेपछि मात्र टे`न्ड`र गर्न पाउने कुरा हो । परिषद्को मिटिङबाट त्यो पास पनि भएको छैन । हतार हतारमा टेन्डर निकालेर सेटिङमा त्यो पनि उहाँले लिनुभएछ । हेर्दाखेरी सबै प्रक्रि`या ग`लत छ । उहाँ ब`ता`सकै पार्ट`नर रहेछन् डिमप्रसाद पौडेलजी ।
त्यही मान्छेलाई ल्याएर योगेश भट्टराईजीले के गर्नुभयो, निगमको एमडी बनाउनुभयो । बतासलाई यता धर्मशाला बुझाउनुभयो । यता ल्याएर निगमको एमडी बनाउनुभयो । बतास र धनन्जय रेग्मी पार्टनर । अनि उहाँलाई ल्याएर पर्यटन बोर्डको सिइओ बनाउनुभयो । कस्तो सेटिङ हेर्नुस् । अनि कसरी बन्छ त हाम्रो देश ?
सबभन्दा बढी यसको गल्ती भनेको म आफैँलाई भन्छु, नेताहरूले गर्दा खेरी हाम्रो देश बिग्रिएको । नेताहरूको चरित्र असल भएको भए यो नेपाल अहिले यो अवस्थामा हुन्थेन । जम्मै नेताहरूको कुदृष्टिको कारणले गर्दा भएको हो । यो देश बिग्रिने पहिलो कारण भनको पोलिटिसिएन । सेकेण्ड चाहिँ ब्यु`रोक्रयाट पनि होलान् । तर सबभन्दा बढी दो`षी भनेको पोलिटीसिएन हुन् ।’
उनले मन्त्रीहरुले राजनीतिक नियु`क्ति दिलाउनको लागि बार्गेनिङ गर्ने गरेको देखेको पनि बताए । मन्त्रीसँग आर्थिक बार्गेनिङ गरेर नियुक्त भएको मान्छेले काम नगर्ने र पैसा कमाउने मात्रै उद्देश्य राख्ने पनि उनले उल्लेख गरे ।
उनले भने – ‘कतै चहि`च्कि`चाएर म भन्न चाहान्छु, मन्त्रीहरू कतिपय मैले के देखेको छु भन्दाखेरी कुनै राम्रो लाभको पदमा पठाउनुपर्‍यो भने पहिल्यै बार्गेनिङ हुँदोरैछ त्यहाँ । अनि बार्गेनिङ भइसकेपछि उसले किन काम गर्छ त ? उसको मुख्य लक्ष्य हुन्छ कसरी कमाउने ? किनकि उसले त बुझाएर आएको हुन्छ नि त । उसको इन्ट्रेस्ट त त्यो हुन्छ नि ।’
मन्त्री आलेले सबै अ`प्ठ्या`रो का`नुनहरूलाई संशो`धन गरेर पर्यटन क्षेत्रको प्रव`र्द्धन गर्नुपर्ने बताए । सरकारले पर्यटकीय क्षेत्रको नयाँ गन्तव्य खोजी भइरहेको भन्दै उनले सो गन्तव्यहरूको विश्वभर प्रचार प्रसार गरेर धेरै भन्दा धेरै पर्यटक भित्राउनुपर्नेमा जोड दिए । रातोपाटी बाट
Last Updated on: February 5th, 2022 at 10:46 am